Fety tany Bali ~ Journey-Assist - Fampahalalana mahasoa momba an'i Bali
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali
Fohifohy momba an'i Bali (Indonezia)
Fivavahana sy kolontsaina
Hotely, trano fandraisam-bahiny
Fiarovana ho an'ny mpizahatany
Hita amin'ny antsipiriany momba ny rohy ireo fampahalalana bebe kokoa:
Bali - ny nosy amin'ny archipelago Malay, ampahany amin'ny faritanin'i Bali any Indonesia. Amin'ny lafiny atsimo any Bali, voasasa any amin'ny avaratra ny Ranomasimbe Indianina - ny Ranomasin'i Bali, izay ampahany amin'ny Ranomasimbe Pasifika. Any andrefana, tafasaraka amin'ny Bali ny sasany. Java dia ny tsipika Java, atsinanan'i Fr. Lombok Bali mampisaraka ny tsatoka Lombok. Bali Square - 5780 metatra toradroa. km, ny halavany mankany andrefana mankany atsinanana - 145 km, avy any avaratra mankany atsimo - 80 km.
Bali no nosy indrindra indrindra ao amin'ny vondrona Sunda kely. Avy any atsinanana ka hatrany andrefana any Bali dia manitatra ny tandavan-tendrombohitra iray misy ny hetsika volokano avo.
Volkano 2 mahery vaika - Agung (haavony - 3142 m) ary Gunung-Batur (haavony - 1717 m) dia hita any avaratra atsinanan'ny Nosy.
Noho ny hetsika volkanika, azo antoka ny fiompiana avo lenta.
Volkano Agung any Bali
Ny ambony indrindra amin'ny haavo hafa dia Batukau (haavony - 2278 m) ary Abang (haavony - 2152 m). Ny tampon-tendrombohitra izay ampidirany dia misy lemaka misy vatosokay any atsimo, izay antsoina hoe bukit, ary mizara ilay nosy manontolo amin'ny faritra 2 izay samy hafa tsy mitovy.
Ny faritra avaratra dia miakatra eo ambonin'ny morontsiraka tery mankany amin'ny tehezan'ny tendrombohitra. Izany dia manana toetrandro somary maina, izay tsara amin'ny fambolena kafe. Izy io dia misy renirano 2 izay manondraka ny tanimbary manodidina an'i Seririt sy Singaraja.
Ny faritra atsimo dia ahitana faritany izay fambolena vary. Betsaka ny renirano mikoriana amin'ny gorges feno zavamaniry maniry.
Any amin'ny faritra atsimo andrefana dia kely ny tanimbary ary misy fambolena maintso misy fambolena voanio.
Toetany sy vanim-potoana any Bali
(Antsipiriany momba ny toetr'andro, toetr'andro ary vanim-potoana any Bali vakio eto)
Bali dia manana toetrandro mifanandrify-monsoon. Raha tokony ho ny fizaram-potoana efatra izay mahazatra amin'ny sisa any Azia Atsimo Atsinanana, dia misy ihany ny roa: maina (manomboka ny volana jona ka hatramin'ny oktobra) ary mando (manomboka ny volana novambra ka hatramin'ny martsa). Ny rotsakorana ambony indrindra dia amin'ny volana Janoary sy febroary. Amin'ny faritra sasany amin'ny nosy, ny tsy fitoviana eo amin'ireo faritra roa ireo dia saika tsy ho tsikaritr'izy ireo. Mandritra ny vanin-taona mafana, ny orana dia eo an-toerana, matetika no jeren'izy ireo amin'ny alina ary maka endrika fohy (avy amin'ny 1 ka hatramin'ny 2 ora) miaraka amin'ny varatra.
Ny isotherm isan-taona dia asehon'ny fihenam-bidy kely manodidina ny +26. Ao amin'ny trano fandraisam-bahiny sy iva, ny hafanana dia maharitra amin'ny alina, fa any an-tendrombohitra kosa no tena mangatsiaka ny alina. Ny mari-pana ny rano amoron-tsiraka dia matetika amin'ny laharana + 26 ... + 28.
Widget misy toetrandro ao Bali. Azonao atao ny misafidy ny sosona mahaliana anao ary hahazo fampahalalana feno momba izany (rivotra, kotrokorana, mari-pana, onja, CO2, sns).
Misy karazana ala ala 4 any Bali: mando tropikaly maitso (any amin'ny faritra andrefan'ny nosy), mihaosa (any avaratra-andrefana), savannahs, ala an-tendrombohitra. Ny ala be Evergreen dia mifantoka amin'ny zaridainan'i Bali Barat. Misy zavamaniry exotic sy hazo goavambe efa niaro ny fanjakana, ary koa ny akondro sy voana maro. Mandrakotra avaratra andrefan'ny Nosy ny ala mikitroka. Miova ny fizaran-tarehiny amin'ny vanim-potoana samihafa.
Tendrombohitra in bali
Ny ala any an-tendrombohitra dia eo amin'ny haavon'ny haavony hatramin'ny 1500 m ary misy ny caorosina sy phylos.
Ny zava-maniry akondro dia heverina ho masina any Bali. Izy io dia loharanom-pahasalamana azo antoka fa tsy ho an'ny olona ihany, fa ho an'ny biby eny an-toerana ihany koa.
Hotely vita amin'ny volotsangana. Bali
Ary eo amin'ny nosy koa dia misy hazo volotsangana volotsangana, indraindray mahatratra 40 sm ny savaivony, mitombo saika manerana ny nosy izy ireo. Bamboo dia akora fanamboarana mahazatra any Bali.
Ny isan'ny mponina tao amin'ny nosy tamin'ny taona 2014 dia nahatratra 4 olona. Ny nosy dia mampiavaka ny fitomboan'ny mponina. Hatramin'ny fiandohan'ny 225 sotrokely. nitombo ny isan'ny isa ao Bali any, mihoatra ny 384 21. Mivavaka ara-pivavahana, ny Bali dia fiaraha-monina Hindoa izay mipetraka ao amin'ny fanjakana silamo ary manana fifandraisana tsy tapaka amin'ny vahiny. Izany dia manatanjaka ny fahalianan'ny olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao any Bali. Tian'ny mponin'ny nosy ny fomban'izy ireo. Manana fihetsika ratsy amin'ny finoana silamo izy ireo, satria io finoana io dia manohintohina ny kolontsain'izy ireo. Ny anjara toerana lehibe tamin'io dia nateraky ny fanafihana notontosaina tany Bali tamin'ny alàlan'ny solontenan'ny Islamo radikaly. Betsaka ny mponina no mino fa ny governemanta Indoneziana dia manery ny hametra ny fahalalahana ara-pivavahan'ny Bali. Na izany aza, ny isan'ireo Silamo ao amin'ny nosy dia mitombo tsikelikely amin'ny alàlan'ny fifindra-monina. Mitombo ny heriny satria betsaka ny mpandraharaha manankarena eo amin'ireo Silamo ao an-toerana.
Ity tanàna manaraka ity dia hita any Bali:
Denpasar. Renivohitry ny bali
Denpasar (mponina 856 000) no tanàna lehibe indrindra ao amin'ny nosy, foibe ara-pitantanana ao amin'ny faritany Bali.
Singaraja (mponina 118) dia foibe indostria any amin'ny morontsiraka avaratry ny nosy, ilay foibe ara-pitantanana taloha (hatramin'ny 000) any Bali.
Kuta dia iray amin'ireo tanàn-dehibe ao Bali.
Ny Ubud (mponina 75 000) no ivon'ny kolontsaina mampiavaka azy any an-toerana, ary ny fon'i Bali.
Bali amin'ny fitambarany dia mijanona ho faritra fambolena. Ny fampandehanana an-tanàn-dehibe, izay miantraika any atsimon'i Bali izay nitranga tamin'ny taona 1980-90, dia tsy nanova ny toe-javatra.
Bali no mpamokatra vary be indrindra any Indonezia, fa ny fahantrana amin'ny tany dia nanomboka tamin'ny fotoana sasany. Taorian'izay dia nanomboka nanentana ny fitomboan'ny fihodinam-bokatra ny governemanta. Voalohany indrindra dia mahaliana amin'ny vanille, kafe, sigara, voamadinika, voankazo citrus.
Ankehitriny dia mivoatra be ny fizahan-tany eto amin'ny nosy. Ny iray amin'ireo antony lehibe amin'izany dia ny tsy fahampian'ny fifandinanan'ny mitovy.
Ny faritra atsimon'i Bali dia ivon'ny fampandrosoana ny asa-tanana; any Kuta, indrindra ny vokatra dia vokarina. Miorina amin'ny fampiasana ny vokatry ny asan'ny mponina eo an-toerana ny jono, saingy ireo mpiasa avy any an-kafa, eny fa na ireo nosy manodidina aza dia manaiky hiasa fa tsy manam-bola no tafiditra.
Na izany aza, noho ny famokarana trano, ny toe-karena Bali dia nanjary tsy niantehitra tamin'ny sehatry ny fambolena, raha nisy kosa ny firongatry ny mpiasa mpamboly.
Ny ankamaroan'ny mponina ao Bali (83,5%) dia mifono fironana amin'ny fivavahana hindia - Agama Hindu Dharma. Silamo ny 13,3% amin'ny mponina ao an-toerana. Izy ireo dia mifantoka amin'ny tanàn-dehibe. Ny Kristiana dia manana 1,7% fotsiny ary ny Bodista - 0,5%. Ny vondrom-piarahamonina Kristiana sy bodista dia ahitana ny Shinoa (ampahany kely amin'ny mponina indizeny ao amin'ny nosy) ary vahiny ela avy any Aostralia sy firenena Eropeana Andrefana (anglisy, Dutch, French, Italians, sns) izay mipetraka any Bali.
Ny kolontsain'ny Bali. asa-tanana
Ny mponina eo an-toerana dia manana kolontsaina manankarena, izay maneho azy manokana, indrindra amin'ny asa-tanana. Bali dia malaza amin'ny sary sokitra hazo, firavaka, sary hosodoko, mozika, dihy. Zavaboary kolontsaina - batik, izay hoso-doko amin'ny lamba vita amin'ny landy na ny landy. Iray amin'ireo seho tena izy dia dihy eo an-toerana tanterahan'ny vondrona lehibe amin'ny akanjo nentin-drazana. Ny tena mahaliana sy malaza indrindra amin'izy ireo dia ny Kecak sy Barong.
Mampiavaka ny Bali
(Pitsopitsony momba ny fitateram-bahoaka, ny lalànan'ny fifamoivoizana, ny bisikileta ary ny fanofana fiara ao Bali, Eto)
Ny serivisy fitaterana eo an-toerana lehibe indrindra dia ny seranam-piaramanidina Ngurah Rai. Avy aminy hatrany Kuta 2,5 km, mankany Sanur - 12 km, mankany Denpasar - 13 km.
Ny fitaovam-pitateram-bahoaka mivezivezy any Bali dia minibus kely izay antsoina hoe "Bemo" eto. Betsaka ireo orinasa minibus toy izany eto amin'ny nosy.
Bemo. Fitaterana Bali Bali
Ny fitaterana olona mahazatra indrindra eo amin'ny mponina eo an-toerana dia pompte sy scooter. Betsaka ny orinasa any Bali manofa fiara sy fiara mpitondra fiara.
Taxi any Bali
Eo koa ireo tolotra be marobe momba ny taxi. Samy manana ny lokony ny masin'izy ireo. Amin'ny ankapobeny, ambany ny saran-dalan'ny taxi-be eto. Ireo mpamily fiarakaretsaka dia mampiasa metatra in fiara.
Kura Kura Bass. Fiantsonana am-baravarana mankany Bali
Amin'ny làlan'ny làlan-tanàna lehibe maro dia azo antsoina hoe lavorary ny lalana eny an-dalambe, fa tsy mahafa-po izany. Vitsy ny famantarana an-dàlana, hany ka tsy dia mahafinaritra noho ny any amin'ny firenena tandrefana ny mitondra fiara any Bali. Ny fivezivezena eny an-dalambe dia somary matevina ihany ao amin'ireo toerana fizahan-tany vitsy monja: Denpasar-Sanur, Denpasar-Kuta, Denpasar-Klunkung. Ny fitohanan'ny lozam-pifamoivoizana ihany koa dia eny amin'ny arabe tery ao Ubud.
(Vakio bebe kokoa momba ny Public Balance any Bali EO)
(Vakio bebe kokoa momba ny fiainana any Bali, vakio eto)
Ny ao Bali dia misy trano fandraisam-bahiny manana orinasa manangana orinasa toa an'i Hilton, Sheraton ary Carleton. Mandritra izany fotoana izany, misy maro hafa mora vidy ary miaraka amin'izay koa, trano fandraisam-bahiny mampahazo aina. Ny fananganana trano fandraisam-bahiny tsirairay any Bali dia manaraka ny lovam-panatanjahantena nasionaly. Ny akora lehibe indrindra dia hazo voajanahary. Ny trano fandraisam-bahiny rehetra dia alevina ao anaty zaridaina, loharano, kamory.
Mila mandamina fiantohana fitsangatsanganana ianao, izay handrakotra fitsaboana amin'ny hopitaly iraisam-pirenena. Ny nosy Bali dia tsy an'ny zona malaria, noho izany dia tsy ilaina ny fanaovana vaksiny raha toa ka ny fikasana dia hasaina hamerana ihany amin'ny faritanin'i Bali.
Ho fisotroana dia aroso ny mampiasa rano mando na ny rano avy amin'ny fivarotana. Ny voankazo rehetra dia tokony hosasana tsara. Kitapo fanampiana voalohany misy andiany fanafody tena ilaina tokoa.
Serasera finday sy Internet any Bali
(Ity lohahevitra ity dia voafaritra amin'ny antsipirihany Eto)
Entina mividy karatra SIM amin'ny iray amin'ireo mpandraharaha Indonezianina. Amin'ity tranga ity, ny fiantsoana ny firenenao dia mety mitentina 1,1 ka hatramin'ny 1,5 dolara isam-bolana, ary ho afaka ny antso miditra. Ny karatra SIM dia amidy any amin'ny toeram-pivarotana lehibe na amin'ny fivarotana finday.
(Antsipirihany momba ireo mpandraharaha finday, tarif ary fampahalalana mahasoa momba azy eto KOA)
11.03.2020 / fanehoan-kevitra ao amin'ny nosy Pigeon tsy misy
10.03.2020 / fanehoan-kevitra mirakitra ny Trincomalee tsy misy
09.03.2020 / Fanehoankevitra 2 amin'ny rakitsoratra Tangalle
07.03.2020 / fanehoan-kevitra ao amin'ny Yala National Park tsy misy
Valan-javaboary Sinharaja (Ala Ala)
07.03.2020 / fanehoan-kevitra tao amin'ny Valan-javaboarin'i Sinharaja (ala ala) tsy misy
Kianja lehibe any Bali
04.03.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny lovia lehibe any Bali tsy misy
02.03.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny Samui (Koh Samui) tsy misy
Nosy Koh Lan. Pattaya. Thailand
17.02.2020 / fanehoan-kevitra ao amin'ny Nosy Koh Lan. Pattaya. Thailand tsy misy
Fahazoana fahazoan-dàlana mpamily vetivety any Sri Lanka
12.02.2020 / fanehoan-kevitra momba ny fahazoan-dàlana mpamily vetivety ao Sri Lanka tsy misy
Fifandraisana amin'ny lamasinina any Sri Lanka
12.02.2020 / 1 Comment amin'ny fifandraisana Railway any Sri Lanka
02.02.2020 / Fanehoankevitra 2 amin'ny mozika Sri Lanka
Saosy ao Sri Lanka
30.01.2020 / 1 Comment amin'ny Sauces any Sri Lanka
Bongo any Sri Lanka
30.01.2020 / Fanehoankevitra 2 amin'ny Spice any Sri Lanka
30.01.2020 / fanehoan-kevitra momba ny zava-pisotro any Sri Lanka tsy misy
Lovia lehibe ao Sri Lanka
30.01.2020 / Fanehoankevitra 4 amin'ny lovia lehibe any Sri Lanka
Dessert any Sri Lanka
30.01.2020 / Fanehoankevitra 3 ao amin'ny Dessert any Sri Lanka
26.01.2020 / 1 Comment amin'ny Sri Lanka Customs
Nosy Koh Chang. Pattaya. Thailand
26.01.2020 / fanehoan-kevitra ao amin'ny Nosy Koh Chang. Pattaya. Thailand tsy misy
Nosy Koh Sichang. Pattaya. Thailand
26.01.2020 / fanehoan-kevitra ao amin'ny Nosy Koh Sichang. Pattaya. Thailand tsy misy
Raha ny marina dia toerana mahafinaritra :) i Bali. Farafaharatsiny taorian'ny Thailand sy Sri Lanka.
Bali ny natiora, ny ranomasina mahery sy ny morontsiraka mafana be ary ny ranomasina.
Ary ny tora-pasika misy fasika volkano mainty dia zavatra iray. Tsy milomano manokana izy ireo, fa ny fijanonana eny amin'ny morony kosa dia ny fialan-tsasatra sy ny fisaintsainana ary ny angovo amin'ny fotoana mitovy.
Ny Ubud no tena fon'i Bali. Ny mpanao asa tanana dia nanome voninahitra ny fahaizany ho an'ny taranaka maro, manao fahagagana tena izy. Ny zavatra sasany dia toy ny hoe tsy azo inoana fa noforonin'olombelona ary tsy mampiasa fitaovana avo lenta.
Mandehandeha any an-tendrombohitra, tondra-drano lehibe, ala.
Toa mahay mandanjalanja ny eo an-toerana. Maloto kokoa, misokatra sy mivantana noho ny any Thailand, ary tsy kamo mihetsika sy tsy mazoto toy ny any Sri Lanka.